बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ र बिक्की काैशलले लिदै सात फेरा, विवहाको मूहुर्त आइसक्यो! – PathivaraOnline
Home > बलिउड > बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ र बिक्की काैशलले लिदै सात फेरा, विवहाको मूहुर्त आइसक्यो!
admin December 9, 2021 December 9, 2021 बलिउड 0
बलिउड अभिनेता विक्की कौशल र कट्रिना कैफ डिसेम्बर ९ मा विवाह बन्धनमा बाँधिदैछन् । दुबैले दिउँसो सात फेरा लगाउनेछन्। विगत दुई वर्षदेखि यी दुईले आफ्नो सम्बन्ध गोप्य राखेका थिए ।
दुबैले आज राजस्थानको सिक्स सेन्स फोर्ट बर्वारामा सात फेरा लिनेछन्। विक्की र कट्रिनाको विवाह दुई समारोहमा हुने बताइएको छ । पञ्जाबी विवाहसँगै दुवैको सफेद विवाह पनि हुनेछ । भर्खरको विक्की-क्याट्रिनाको विवाह समारोह मध्याह्न सुरु हुनेछ, पेरेपिन्कभिलाको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार। करिब ३:३० देखि ३:४५ सम्म दुवैले सात फेरा लिनेछन्।
मण्डप यसरी बनाइएको छ कि यसको मुख मन्दिर तर्फ हुन्छ। इन्स्टाग्राममा यो पोस्ट हेर्नुहोस् कट्रिना कैफ (atkatrinakaif) द्वारा सेयर गरिएको एक पोस्ट पछिल्लो दुई दिनमा मेहन्दी र हल्दीको समारोह भएको छ। यस अवधिमा सबै पाहुनाहरूले धेरै रमाइलो गरे। रिपोर्टका अनुसार कट्रिना कैफकी आमाले विक्की कौशलका आमाबुवालाई लण्डनमा निम्तो दिएकी छन् ।
डिटेलमा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दुबै जना जनवरी महिनामा लण्डन जाने र परिवारसँग राम्रोसँग चिनजान गर्ने प्रयास गर्ने बताइएको छ । यसैबीच विक्की कौशलकी आमाले कट्रिनालाई आफ्नो पञ्जाबी परिवारमा स्वागत गरेकी छिन् । कट्रिना-विक्कीको विवाहमा अक्षय-सलमानको नाम नभई यी ९ बलिउड सेलिब्रेटी सहभागी हुनेछन्, यो जोडीको विवाहमा १२० जना मात्रै सहभागी हुने खबर छ तर फराह र करणसहित बलिउड उद्योगका ९ जना मात्र अतिथि सूचीमा परेका छन् ।
अभिनेत्रीको गेस्ट लिस्टमा सलमान खान र अक्षय कुमारको नाम मात्रै छैन, सलमान कट्रिनाका सबैभन्दा नजिकका साथी हुन् । कट्रिनाले सलमानसँग धेरै फिल्ममा काम गरेकी छिन् । कट्रिनाले सलमानको परिवारसँग पनि विशेष सम्बन्ध राखेकी छिन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य आयो, डिजेल र पेट्रोलको भाउ कति ?